ရာခေလသည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရာခေလသည်ရှာလုံ
ငါခရီးသွားလာရန်နှင့်ငါ့ခရီးနှင့်ငါတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြရန်အသက်ရှင် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အီတလီ, ဥရောပရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်များထဲမှ, ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ငွေရတတ်သောယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း, ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ, ကမ္ဘာကျော်အစားအစာ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, သဘာဝကအလှတရား၏ဆိုဒ်များ ... ပြီးတော့စျေးဝယ်ရှိပါတယ်! ရထားအီတလီနိုင်ငံမှခရီးသွားလာတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံ. သင့်အနေဖြင့်လှပသောရှုခင်းအပေါငျးတို့သကိုခံစားရ…
အဘယ်ကြောင့်ရထားဖြင့်ခရီးသွား Environmental Friendly Is
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသွားလာအရှိဆုံးပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကီလိုမီတာနှုန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ဖန်လုံအိမ်သက်ရောက်မှုပင်ဖြစ်သည် 80% မော်တော်ကားထက်လျော့နည်း. အချို့နိုင်ငံများရှိ, ထက်ငယ်သော 3% ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုရထားကလာအားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ပိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းများ…
Eco ခရီးသွားအချက်အလက်များ, ရထားခရီးသွားခြင်း